ज्योतिष शास्त्रअनुसार कुन बार जन्मिने मानिस कति भाग्यमानी ? – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/ज्योतिष शास्त्रअनुसार कुन बार जन्मिने मानिस कति भाग्यमानी ?
ज्योतिष शास्त्रमा मानिसको जन्म समयलाई आधार मानेर उसको भूत, वर्तमान र भविष्यका बारेमा फलादेश गरिन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ भन्ने भविष्यवाणी गरिन्छ ।
मानिसको जन्म समय मात्र होइन कुन बार जन्मिएको हो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव पनि मानिसमा पर्छ । मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत जन्म बारबाट थाहा पाउन सकिन्छ । आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमबारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलबार मंगलको प्रभाव हुन्छ । त्यसैगरी बुधबार बुधको प्रभाव । विहीबार वृहस्पति र शुक्रबार शुक्रको प्रभाव र शनिबारको कारक ग्रह शनि रहने ज्योतिष शास्त्रले बताउँछ ।
बारअनुसकार मानिसको भाग्य कस्तो हुन्छ ?
आइतबारः आइतबार जन्मिने पुरुष भाग्यशाली हुन्छन् भने स्त्री दानी, बलशाली एवं चतुर हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिबारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ ।
सोमबारः सोमबार जन्मिने पुरुषको बोली मिठो हुन्छ । यस्ता ब्यक्तिको जीवनमा सुख दुख बराबर जस्तै हुन्छ । सोमबार जन्मिने स्त्री पनि रुपवती हुन्छिन् । यस्ता महिलामा मिठो बोली र पुत्रवति र बोलीको प्रभाव बढी रहने हुन्छ ।
सोमबार जन्मिने ब्यकेति विद्वान, कला कुशल र बहादुर पनि हुन्छन् । सोमबार जन्मिने ब्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासको रोग हुन सक्छ यस्ता ब्यक्तिलाई ९, १२, २७ वर्षमा कष्ट हुन्छ ।
मंगलबारः मंगलबार जन्म हुने पुरुष सामान्यतया धनी हुन्छन् । यस्ता ब्यक्तिको स्वभाव उग्र हुन्छ । यसै कारण उनीहरुसँग मानिसहरु वेखुसी हुन्छन् । मंगलबार जन्मिने स्त्री पनि कठोर स्वभावकी हुने गर्छन् । उनीहरुमा रिस बढी हुने गर्छ । यिनीहरुलाई छाला सम्बन्धी रोग हुन सक्छ ।
बुधबारः बुधबार जन्मिने ब्यक्ति धर्मकर्ममा बढी विश्वास राख्ने स्वभावका हुन्छन् । यिनीहरुको बोलीमा मिठास हुन्छन् । यिनीहरुको ८ र २२ वर्षको उमेरमा कष्ट पाउने योग हुन्छ । स्त्रीहरु भने विशेषज्ञता हासिल गर्ने हुन्छन् । उनीहरु सुन्दर र शुसील पनि उत्तिकै हुन्छन् ।
विहीबारः विहीबार जन्मिने पुरुष विद्वान र पराक्रमी हुन्छन् । यिनीहरुले जीवनमा धेरै उतार चढाव र समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ । तर पनि साहसी हुन्छन् । यिनीहरुसँग संगत हुनेहरु खुशी हुन्छन् । विहीबार जन्मिनेहरुलाई ७, १२, १३, १६ र ३० वर्षमा संकट पर्छ ।
शुक्रबारः शुक्रबार जन्मिने ब्यक्ति हँसिलो स्वभावका हुन्छन् । बुद्धिमानी र मृदुभाषी हुन्छन् । मिलनसार स्वभावका हुन्छन्, सहनशील पनि उत्तिकै हुन्छन् । २० र २४ वर्षको उमेरमा उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने हुन्छ । स्त्री शुक्रबार जन्मेकी छे भने उसको स्वभाव चञ्चल हुन्छ ।
शनिबारः जुन ब्यक्तिको जन्म शनिबार हुन्छ उनीहरु कृषि ब्यापार वा प्रविधीको क्षेत्रमा रुची राख्छन् । यिनीहरुका लागि बाल्यकाल कष्टपूर्ण हुन सक्छ । भाइ बहिनी वा दाइ दिदीबाट सुख प्राप्ति हुँदैन । यिनीहरुलाई २० र २५ वा ४५ वर्षमा कष्ट हुन्छ ।
कैलालीका कोरोना संक्रमित युवा चैत ११ गते एक हजार जनाको भीडमा थिए !
‘मलेसियामा भगवान सम्झिएर काम गरिरहेको छु’